7 Kurapa Kwechisikigo kwePsyoriasis Arthritis [Natural Natural Measure]
7 Kurapa kwechisikirwo kwePsymaasis Arthritis
11 / 03 / 2019 /0 Comments/i rheumatism/av kundikuvadza
Psoriatic arthritis chirwere chemhezi chakabatana chinogona kuputsa moyo Ichi ndicho chikonzero nei vanhu vazhinji vachitsvaga matanho anogona kuvabatsira mukubatana nemishonga. Pano iwe unogona kuverenga zvimwe pamusoro pechinomwe marapirwo ekurapa psoriatic arthritis iyo inogona kubatsira kuregedza kurwadziwa.
Psoriasis arthritis inobata vangangosvika makumi matatu muzana evaya vane chirwere cheganda psoriasis - iyo inoratidzirwa nechena, ganda rakatsetseka pa, pakati pezvimwe zvinhu, magokora, ganda romusoro nemabvi. Marwadzo akabatana, kuomarara uye kuzvimba ndizvo zvitatu zvinowanzoonekwa zviratidzo zvepsoriatic arthritis - uye zvinogona kunyanya kukanganisa vertebra yako neminwe.
Isu tinorwira avo vane kumwe kurwara kusingaperi kwekurwadziwa uye zvirwere kuti vave nemikana iri nani yekurapwa uye kuongororwa - chimwe chinhu chisiri munhu wese anotenderana nacho, zvinosuwisa. Govera chinyorwa, sesu pane yedu FB peji og yedu YouTube chiteshi munhau dzezvemagariro kubatana nesu mukurwira hupenyu hwese hwepamoyo kune avo vanorwara nemaronda.
(Dzvanya apa kana uchida kugovera chinyorwa icho mberi)
Ichi chinyorwa chinoenda kuburikidza nomwe zvokurapa zvokurapa psoriasis arthritis iyo ine tariro kukubatsira kudzikisa zviratidzo zvako. Pazasi chechinyorwa iwe unogonawo kuverenga zvirevo kubva kune vamwe vaverengi uye tora mazano akanaka uye zano.
Uri kushamisika chimwe chinhu here kana kuti unoda zvimwe zvehunyanzvi hwekuzadza? Titevere pane yedu Facebook peji «Vondt.net - Tinoderedza marwadzo ako»Kana Yedu Youtube chiteshi (inovhura mu new link) yezano rakanaka rezuva nezuva uye neruzivo rwehutano runobatsira.
Vanhu vazhinji vanoziva nezve aloe vera yekuporesa zvivakwa - uyezve pamwe kunyanya kupokana nezuva ganda. Hazvishamisi, zvakare ichokwadi kuti ichi chirimwa chechisikigo chinogona kubatsira kupikisa psoriatic arthritis. Aloe vera based creams uye mafuta ekuzora anogona kubatsira kuregedza kutsvuka kweganda, kuderedza kubhururuka uye kuderedza kurwadziwa kwekurwadziwa.
Tsvaga1) yakambogumisa kuti 81% yevarwere vakashuma kuvandudzwa nekushandisa aloe vera yavo psoriasis uye psoriasis arthritis. Zvimwe zvidzidzo zvekutsvaga zvakaratidza kuti zvinoshanda kuderedza kuzvimba (2) uye kuti inoderedza kunzwa kwekurwadziwa munzvimbo.
Yoga, kutambanudza uye kufamba kwekurovedza muviri inogona kuve nzira yakanaka yekubvisa kusagadzikana kwepfungwa uye kwemuviri - kunyanya usati warara. Mune chinyorwa pazasi iwe unogona kuona chirongwa chekudzidzisa chinokuratidza mashanu mashanu akanyarara maekisesaizi.
Verenga zvimwe: - 5 Exercises kurovedzera kune avo vane Fibromyalgia
Dzvanya apa kuti uverenge zvakawanda nezveaya mabasa ekurovedza muviri - kana tarisa vhidhiyo pazasi.
VIDEO: Mafambiro mashanu Ekufambisa Kune Vaya vane Fibromyalgia
Psoriatic arthritis yakabatana zvakananga nemitezo yakaoma uye inorwadza. Nokushandisa zuva nezuva kutwasanudza uye kufamba muviri, unogona kubatsira kuita majoini kufamba uye kudzivirira kuora. Muvhidhiyo iri pazasi iwe uchaona shanu dzakadai kurovedza.
Joinha mhuri yedu uye unyorere kune yedu YouTube chiteshi (tinya pano) kune mazano epamhepo ekurovedza muviri, zvirongwa zvekurovedza muviri uye ruzivo nezvehutano. Kugamuchirwa kuva!
Capsaicin ndiyo inoshamisika midziyo mune zvidyarwa chilih. Uyu mushonga unoshandiswa mune dzakasiyana siyana marimi maronda uye mafuta ekuzora anosanganisira Linnex. Chikonzero icho chashandiswa ndechekuti capsaicin ine kiriniki yakaratidzirwa maitiro muchimiro chekuderedza marwadzo, kudzikisira kuzvimba uye kutsvuka kweganda - iro rakanangana zvakananga ne psoriasis.
Kana mafuta akadaro achizoiswa paganda, izvi zvichabatsira kuvhara zviratidzo zvekurwadziwa munzvimbo. Mune mamwe mazwi, chizoro chinodzivirira nzvimbo kubva kutumira marwadzo kuuropi - izvo zvinogona kupa zororo kubva pakurwadziwa.
Vanhu vakawandisa vanonetsekana nemarwadzo uye nezvirwere zvinopedza hupenyu hwezuva nezuva - ndosaka tichikurudzira kuti Goverana chinyorwa ichi mune zvemagariro enhau, Inzwa wakasununguka kuda yedu Facebook peji og YouTube mugero (tinya pano) uye uti, "Hongu kutsvakisisa kutsvagurudzo yezvirwere zvisingaperi".
Nenzira iyi, munhu anogona kuita kuti zviratidzo zvinosanganisirwa neiyi kuongororwa zvioneke uye ave nechokwadi chekuti vanhu vazhinji vanotorwa zvakanyanya - uye nekudaro vanowana rubatsiro rwavanoda. Isu tinotarisirawo kuti kutarisisa kwakadai kunogona kutungamira kune yakanyanya mari yekutsvagisa nezvenzira nyowani dzekuongorora uye nzira dzekurapa.
Kudya kwakaringana ine yakakwira yezvinyorwa zveantioxidants uye yakakosha inorwisa-kupisa zvinovaka muviri zvakare yakakosha kune rheumatologists. Iyo 'fibromyalgia dhayeti' inotevera yenyika dhayeti kuraira uye nhungamiro. Unogona kuverenga zvakawanda nezvazvo muchinyorwa chiri pasi apa.
Verenga zvakare: - Ruzivo rwekutsvagisa: Iyi ndiyo Yakanyanya Fibromyalgia Kudya
Dzvanya pamufananidzo kana chinongedzo pamusoro apa kuti uverenge zvakanyanya nezve chakakodzera chikafu chakashandurwa kune avo vane fibro.
Turmeric nemhedzisiro yayo yekurapa iri pakati pezvakanakisa kunyorwa pasi - zvakare mukushandisa kwayo kurwisa rheumatic kusagadzikana. Pamamwe mhedzisiro inobatsira mu turmeric, uye inoshanda yayo Sanganisa Curcumin, zvakaonekwa kuti inogona kutamba basa rinoshanda mukudzivirira kweAlzheimer's, kuderedza mukana wekushungurudzika uye kugadzirisa basa remidziyo yeropa.
Mune chidzidzo (3) vaongorori vakagumisa kuti curcumin yakanyanya kushanda pane diclofenac sodium (inozivikanwa zviri nani seVoltaren) mukurapa kwevanoshanda rheumatic arthritis. Ivo vakanyora zvakare kuti kusiyana neVoltaren, curcumin haina chakaipa.
Turmeric inogona kuve nzira ine hutano uye yakanaka kune avo vanorwara neosteoarthritis uye / kana rheumatism - zvakadaro hatisi kuona akawanda ekurudziro kubva kuGPs kuti varwere vane marwere akadai vanofanira kunge vaine turmeric panzvimbo yekurapa.
Vazhinji vane rheumatism uye psoriatic arthritis vari zvakare kutambudzika pamwe nekubatana kwemutsipa nemapfudzi. Vanewo chiitiko chepamusoro cheicho chinonzi chinonzi Kusimbisa mutsipa. Mune chino chinyorwa chevaeni kubva kuRåholt Chiropractor Center uye Physiotherapy iwe unogona kuverenga zvakawanda nezve ino chirwere.
Verenga zvakare: - Izvi Unofanirwa Kuziva Nezve Stress Kutaura
PS: Icho chinongedzo chinovhura muwindo idzva.
Acupuncture kurapwa kwakanyatsorapwa kunogona kudzoreredza kurwadziwa kwemasumbu nekuda kwe psoriatic arthritis. Nekudaro, isu tinoda kusimbisa kuti tiri kutaura pano nezvekurapa kurapwa - kureva intramuscular tsono kurapwa iyo yakanangana nematambudziko akabatwa. Kurapa kwakadaro kunofanirwa kuitwa chete nehutano hweveruzhinji nyanzvi (senge yemuviri Therapist kana yemazuva ano chiropractor).
Intramuscular acupuncture (inozivikanwawo seyakaoma tsono kana yekumutsidzira mukati) inoshanda nenzira dzinoverengeka - kurapwa uku kunogona kutungamira ku:
Diki rakapfava tishu uye kurwadziwa kwemhasuru
Kuwedzera kuporesa munzvimbo yakarapwa
Idzo tsono dzinoshandawo padanho rezveuropiyasi apo ivo vanopaza kudzika kwetsandanyama uye kudzikisira kufambiswa kwemasaini ekurwadziwa emuno. Nzira yakachengeteka uye yakapfava yekurapa iyo inowanzo shandiswa sechinhu chinowedzera pakurapa kwepanyama kwetsandanyama, mutsipa uye majoini.
Pazasi iwe unogona kuverenga pamusoro pedzimwe nzira masere dzekudzivirira dzinogona kuve dzinobatsira kune rheumatics.
Verenga zvakare: - 8 Matanho Ekuzvimba Anopokana neRheumatism
5. Epsom Munyu (Bath Munyu)
Epsom munyu ndeye inozivikanwa yekugeza munyu unoshandiswa nevanhu vazhinji vane psoriasis uye psoriasis arthritis. Munyu unonyungudika nyore nyore mumvura yekugeza uye unodhira mukati meganda. Kugara uchishandisa kunogona kushanda zvakananga kunosimbisa ganda rakatsamwiswa uye rakapiswa.
Vazhinji vano taurawo zvinotevera kana vachishandisa iyo yekugeza inopisa:
Kudzikisira uye Kuderedza Kwekushushikana
Rubatsiro rweMukurwadziwa kweMisipha
Pasina kutsamwa kweganda uye kubhururuka
Nekudaro, zvakakosha kutaura kuti masayendisiti anotenda kuti inyowani yekugeza inopisa inoshanda zvakanyanya kusunungura pamaronda emaronda uye nemuviri unorwadza. Asi hosha dzeganda dzinoratidzika kunge dzinogona kudzikisiswa neimwe nzira nekushandisa kweimwe yekugeza salts - senge epsom munyu.
Verenga zvakare: Chii Chaunofanira Kuziva nezve Psoriasis Arthritis [Guru Guru]
6. Kurapa Kwepanyama uye Kusasana
Psoriatic arthritis inokonzeresa chiitiko chekurwadziwa mumhasuru uye majoini. Ichi chikonzero nei zvichikosha kwazvo kuti uwane rubatsiro rwehunyanzvi kuti uenderere pamwe nekuoma kwemajoini uye mhasuru dzakaonda. Vazhinji rheumatologists vanoshandisa kurapwa kwemasumbu uye majoini kuburikidza nevarapi vane mvumo yekurapa.
Chinhu chakanakisa kune mumwe munhu ane psoriatic arthritis kazhinji kiriniki anoshanda nemaviri mhasuru nemajoini - senge yekurapa yekurapa kana chiropractor yemazuva ano. Izvi zvinogona kubatsira kuchengetedza kwemajoini uye kuderedza marwadzo kubva kune akaomeswa mhasuru.
Nehurombo, psoriasis arologist ndeyekuongororwa kusinga kurapike. Asi nerubatsiro rwechiremba ane hunyanzvi uye chiremba wako, iwe unogona kuchengetedza huwandu hwezviratidzo hwacho. Isu tinosimbisa zvakare kukosha kwekugadziriswa kwekudzidzira muviri kune avo vane psoriatic arthritis.
Yakakurudzira Yega-Kubatsira kweRheumatic uye Kusingaperi Kurwadziwa
Compression fuertes (senge kumanikidza masokisi anobatsira mukuwedzera kweropa kutenderera kusvika pakurwadzisa nyama kana yakanyatsogadziriswa compression magurovhosi og masokisi zvinopesana nerheumatic zviratidzo mumaoko nemakumbo)
Zvigunwe zvechigunwe (mhando dzinoverengeka dze rheumatism dzinogona kukonzeresa zvigunwe - semuenzaniso zvigunwe sando kana hallux valgus (yakakombamira chigunwe chikuru) - zvigunwe zvigunwe zvinogona kubatsira kusunungura izvi)
Arnica kirimu kana kupisa conditioner (vanhu vazhinji vanotaura zororo rekurwadziwa kana vakashandisa, semuenzaniso, arnica cream kana kupisa chinodziisa)
- Vanhu vazhinji vanoshandisa arnica kirimu yekurwadziwa nekuda kwemajoini akaomarara uye mhasuru dzinorwadza. Dzvanya pamufananidzo uri pamusoro kuti uverenge zvakawanda nezvekuti sei arnicakrem inogona kubatsira kusunungura imwe yemamiriro ako ekurwadziwa.
Verenga zvakare: Iwo manomwe Mhando dzeFibromyalgia Pain [Guru Guru kumhando dzakasiyana dzekurwadziwa]
Dzvanya-kurudyi uye "vhura muhwindo idzva" kana uchida kuenderera mberi nekuverenga chinyorwa ichi mushure.
Green tii ine yakakwira mwero yekatekini - akasimba antioxidants ayo anozivikanwa kuve anobatsira anopesana nekuzvimba zvivakwa. Izvi zvinogona kubatsira kuderedza chiitiko chekuzvimba uye kuzvimba kwakabatana mu psoriatic arthritis uye zvimwe zvirwere zvakabatana.
Tsvagurudzo yakaratidza kuti inoshanda, pakati pezvimwe zvinhu, nekuvharira chinhu chechiropa chinonzi cytokine interleukin-1. Kuvhara uku kunobatsira kuderedza mukana we psoriasis arthritis kuputsa yakawedzerwa cartilage uye zvinhu zvinobatanidzwa.
Isu tinogara tichikurudzira kuti chikafu chevarumatologists chine imwe yakakwira mwero weanorwisa-kupisa antioxidants - izvi zvinowanikwa mumiriwo nemichero yakawanda yakasiyana.
Verenga zvakare: Nzira dzechinomwe LDN dzinogona Kubatsira Kupesana neFibromyalgia
Unoda rumwe ruzivo? Joinha boka iri uye ugovana ruzivo rwacho mberi!
Joinha boka reFacebook «Rheumatism uye Chirwere Chisingaperi - Norway: Kutsvaga uye nhau» (tinya pano) zveruzivo rwekupedzisira nezvekutsvagisa uye nekunyora kwenhau nezve rheumatic uye chisingaperi chirwere Pano, nhengo dzinogona zvakare kuwana rubatsiro uye rutsigiro - panguva dzese dzezuva - kuburikidza nekuchinjana kwavo kwavo uye nezano.
Titevere isu paYouTube Yemahara Hutano Kuziva uye Maekisesaizi
VHIDHIYO: Exercises yeRheumatists uye Avo Vanobatwa neFibromyalgia
Inzwa wakasununguka kunyoresa pachiteshi chedu (tinya pano) - uye tevera peji redu paFB kune matipi ezuva nezuva ezvehutano uye zvirongwa zvekurovedza muviri.
Isu tinonyatsovimba kuti chinyorwa ichi chinogona kukubatsira iwe mukurwisa kurwadziwa kusingaperi. Kana ichi chimwe chinhu chauchashuwira nezvako, saka tinovimba kuti unosarudza kujoina mhuri yedu mune zvemagariro nhau uye kugovera chinyorwa ichi mberi.
Inzwa wakasununguka kugovera muSocial Media yekuwedzera Kunzwisisa kwechirwere Chisingaperi
Zvekare, tinoda kudaro bvunza zvakanakira kugovera chinyorwa ichi munhau dzezvemagariro kana kuburikidza ne blog yako (ndokumbira kubatanidza zvakananga kuchinyorwa). Kunzwisisa, ruzivo rwevose uye kuwedzera kutarisisa ndiwo matanho ekutanga kune hupenyu hwezuva nezuva hwevaya vane chirwere chisingaperi chekurwadziwa.
Mazano ekuti ungabatsira sei kurwisa kurwadziwa kusingaperi:
Sarudzo A: Goverana zvakananga paFB - Kopa iyo webhusaiti kero uye unamate pane yako facebook peji kana mune inoenderana facebook boka iwe uri nhengo. Kana tinya bhatani "SHARE" pazasi kugovera iyo posvo mberi pane yako facebook.
Bata izvi kuti ugovane zvimwe. Kutenda kukuru kune wese munhu anobatsira kusimudzira kunzwisisa kukuru kweavo vane kurwadziwa kusingaperi.
Sarudzo B: Batanidza zvakananga kuchinyorwa pane yako blog kana webhusaiti.
Sarudzo C: Tevedza uye wakaenzana Yedu Facebook peji (tinya apa kana uchida) uye Yedu YouTube chiteshi (tinya apa kuti uone mamwe emahara mavhidhiyo!)
uye zvakare yeuka kusiya nyeredzi chiyero kana iwe waifarira chinyorwa:
Wakafarira nyaya yedu here? Siya nyeredzi nyeredzi
NEXT PAGE: - Fibromyalgia uye Kurwadziwa Mumangwanani [Zvaunofanira Kuziva]
Yakakurudzira rubatsiro rwekuongororwa uku
Compression fuertes (semuenzaniso, kumanikidza masokisi anoita kuti ropa riwedzere kuwanda kusvika pamaronda
Tevera Vondt.net pa YOUTUBE
Tevera Vondt.net pa Facebook
(Isu tinoedza kupindura kune yese mameseji uye mibvunzo mukati meawa makumi mana nemana nemana makumi mana neshanu. Tinogona zvakare kukubatsira kududzira mhinduro dzeMRI nezvimwe zvakadaro.)
Goverana ichi post
Goverana ne Facebook
Goverana ne Twitter
Share musi WhatsApp
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Naturlige-behandling-psoriasis-artritt.jpg?media=1648573622 368 700 kundikuvadza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 kundikuvadza2019-03-11 20:55:212021-03-24 10:59:597 Kurapa kwechisikirwo kwePsymaasis Arthritis
Unoda kubatana nehurukuro yacho?
Inzwa wakasununguka kupa!
Yako email kero haizoburitswa. Minda inosungirwa inomakwa ne *
Sevha zita rangu, email uye webhusaiti mune ino browser kuitira nguva inotevera pandichapindura.
7 Anozivikanwa Fibromyalgia Trigger 6 Maekisesaizi ekudzivirira Akakoshesa Mutsipa Osteoarthritis